लाइफ स्टाइल - साप्ताहिक
यो वर्षको असोज यता मात्र केन्द्रमा पाँचवटा छावा जन्मिए । प्रजनन् केन्द्रमा पहिले एउटा वीरेन्द्रप्रसाद नामक घरपालुवा भाले हात्ती थियो । उसको संसर्गबाट केन्द्रमा दुईवटा छावा जन्मिएका छन् । निकुञ्जका ढोइ (पोथी हात्ती) जंगली मत्ता (भाले)कै सम्पर्कबाट गर्भवती हुने गरेको चौधरीले बताए । पुरा पढ्नुहोस्
रोजिन शाक्य, आश्विन १३, २०७५
धूलो एवं प्रदूषणको जति बढी सामना गरिन्छ । साबुन छनौट गर्दा त्यति नै सचेत हुनुपर्छ । आफ्नो छालाअनुरूपकै साबुन प्रयोग गर्नुपर्छ । ओयली स्किनका लागि फ्रुट वा जेल बेस्ड साबुन तथा ड्राइ स्किनका लागि क्रिम बेस्ड साबुन प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
प्रभासमान तथा निकिताको विवाह भने आगामी फागुन महिनामा मात्र हुनेछ । ‘असारमा अलि हतार हुने भएकाले हामीले छोराको विवाह फागुनलाई सारेका हौं, प्रभासमानकी आमा सिर्जना सिंहका अनुसार फागुनको कति गते विवाह गर्ने भन्ने चाहिँ निश्चित गर्न बाँकी छ । पुरा पढ्नुहोस्
डा. सुमनराज ताम्राकार, फाल्गुन ३०, २०७४
मधुमेहबाट ग्रसित पुरुषमा लिंग उत्तेजनाको समस्या सिर्जना हुन सक्छ । सफल र सुखद यौनसम्बन्धका लागि पुरुष लिंग राम्रोसँग उत्तेजित हुनु जरुरी छ भने यौन उत्तेजनासँगै महिलामा पर्याप्त मात्रामा योनिरसको उत्पादन पनि आवश्यक छ । पुरा पढ्नुहोस्
कृष्ण भट्टराई, माघ १६, २०७४
‘वास्तवमा हामीले सन्तपुरलाई वस्ती भन्न छाडिसक्यौं, निर्माण कार्य एक सय दिन पूरा भएको मौका पारेर साप्ताहिकसँग कुराकानी गर्दै धुर्मुसले भने– ‘यो सन्तपुर सिटी हो, यसलाई अब सबैले सन्तपुर सिटी भन्दा फरक पर्दैन ।’ पुरा पढ्नुहोस्
नरेन्द्र रौले, भाद्र २७, २०७१
एड्रिनोल्युकोडिस्ट्रफी त्यस्तो रोग हो, जुन लाखौंमा एक जनालाई हुन्छ। यो रोग केही वर्षअघि नेपालमा पनि देखियो। पुरा पढ्नुहोस्
विमल खतिवडा, भाद्र २०, २०७१
तपाईं सर्प देख्दा के गर्नुहुन्छ? आत्तिएर भाग्नुहुन्छ होला। पक्कै त्यसलाई समात्न जानुहुन्न, तर चितवन, शिवनगरका सुनिल सापकोटा सर्प देख्दा खुसी हुन्छन्। पुरा पढ्नुहोस्
अश्विनी कोइराला, भाद्र १३, २०७१
शारीरिक तन्दुरुस्ती स्वस्थ प्रहरीको पहिचान हो, अनि कलात्मक लेखक उत्कृष्ट साहित्यकारको परिचय। पुरा पढ्नुहोस्
नर्स बन्ने रहर पूरा भएन
नरेन्द्र रौले, भाद्र ६, २०७१
लोकगायिका मञ्जु पौडेलले नेपालमा तीज मनाउन नपाएको पाँच वर्ष भयो। गत वर्ष उनी मुम्बईमा थिइन्। पुरा पढ्नुहोस्
शिव मुखिया, श्रावण ३०, २०७१
अनुमान गर्न गाह्रो थिएन, त्यहाँ उनी फिजिकल फिटनेसका निम्ति पुग्छिन्। तोकिएकै समयमा पशुपति प्लाजास्थित इन्दे्रणी हेल्थ क्लब पुरा पढ्नुहोस्
शिव मुखिया, श्रावण २३, २०७१
कुनै कामविशेषले थापाथलीको नेपाल राष्ट्र बैंक पुग्नुभयो भने तपाईंसँग परिचित अनुहार ठोक्किन आइपुग्छ। पुरा पढ्नुहोस्